Soomaali Alifbeet - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan alifbeetada aasaasiga ah ee wax qorista Luuqada Soomaaliga.
Boodhadhka astaamaha oo ku qoran Af Soomaali magaalada Minneapolis.
Alifbeetka Far Soomaaliga
Farta Cusmaaniyada ee Qoraal Soomaaliga
Soomaali Alifbeet (Af-Ingiriis: Somali alphabet; Af-Carabi: الأبجدية الصومالية) waa nidaam xarfo loo habeeyay si kala horeeysa taasi oo loo isticmaalo in lagu qoro Luuqada Soomaaliga. Alifbeetku waa aasaaska dhamaan wax qorista farta. Tusaale ahaan, Af Soomaaligu wuxuu leeyahay dhowr nooc oo Far Soomaali ah, laakiin waxaa si sharci ah loo isticmaala qaabka laatiiniga oo dowlada Soomaaliya sharciyeysay horaantii sanadihii 1970kii.
3 Far Soomaali
4 Qoraaga Farta
5 Noocyada Alifbeetka
6 Qoraalo Kale
Alifbeetka Soomaaliga waa afka ah Afro-ka qatanaanayaan, ka tirsan laanta qoyska in ay Kushiti. Waxaa lagaga hadlo sidii afka hooyo adigoo dadka asalkoodu Soomaalida yahay ee Greater Soomaaliya iyo Soomaalida qurbaha a. Soomaali waa luuqad rasmi ah Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, luqadda qaran ee Jabuuti, iyo af wada shaqayn ah ee gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Waxa loo isticmaalaa sida afka ah korsaday adigoo a kooxo dhowr deriska ah qowmiyadaha tirada yar iyo shakhsiyaad.
Farta alifbeetka Soomaalida waxay ka kooban tahay 21 xaraf oo shiibane ah iyo 5 xaraf oo shaqal ah, taasi oo guud ahaan ka dhigeysa 26 xaraf.
Shibbanayaasha waxay ku / b D q / marar badan oo daciifay si / β Ð ɣ / waxay ku retroflex / ɖ / dhici karta in tayada ku hadla qaarkood, iyo xaqiijiyay karaa sida uu u xir / ɽ /. Hadla Qaar ka mid ah soo saara / H / qaba epiglottal. / q / waxaa inta badan luqad waxa uu leeyahay shan codadka aasaasiga ah. Dhaxlay kala duwanaansho xagga hore iyo xagga dambe iyo sidoo kale qoraalkii ka dheer ama gaaban. Tani waxay ku siinaysaa duwan oo 20 codadka saafi. Waxa kale oo ay isku beel yihiin saddex codadka: sare, ku yar iyo hoos.
Qaabka xarfaha of Soomaali waa (C) V (C). Root sida caadiga ah waxay leeyihiin qaab-dhismeedka mono-ama di-syllabic ah. Axzaab waa Higaadda ee Soomaali, laakiin waxaa la dooday in Soomaali waa lahjadda garoonka ama afka ku tusaa. Abdullahi (2000), shaqada ugu dambeeyey barax-tiran oo mawduucan ku, soo jeediyay, in Soomaali luqad ku tusaa ma aha.
Qoriddii Af-soomaaliga waxa ka qayb qaatay Aqoonyahanno Soomaaliyeed oo aad u fara badan. Xarfaha higgaadda Af-soomaaligu waa Shaqal 5 xaraf ka kooban iyo Shibbane 21 xaraf ah.
Shibbane oo kala ah:
B T J X KH D R S SH DH C G F Q K L M N W H Y (waaweyn)
b t j x kh d r s sh dh c g f q k l m n w h y (yaryar)
Shaqal oo kala ah - Shaqal gaab:
Afka Soomaaliga marka laga fiiriyo falalka waxay ku dhamaadaan, laakiin ayadoo loo eegayo amar ahaan waxa uu ku dhamaado ayaa waxaa suura gal ah in ayu dhamaadaan kuwo kale sida fal amar ah oo ku dhamaado "o" da waxaa lagu bedelayaa "A" waxaana la raacshaa "SHO". Tusaale: baxsasho(baxso), dhimo(dhimasho), seexo(seexasho), fadhiiso(fadhiisasho).
Si la mooda waxaa kale oo jiira falal ku dhamaada "N", kaa oo amar haan marka aan ka soo gano uu ku idlaado "Y" ama "I". Tusaale: xooji(xoojin), sii(siin), beer darey(beer dareyn).
Farta Soomaali Laatiinka waxaa fikradeeda lahaa oo habeeyay aqoonyahan Shire Jaamac Axmed (Af-Carabi: شيري جامع أحمد) kaasi oo kaashanayay gudi ay Dowladii Soomaaliya ku dartay. Shire wuxuu ahaa luuqadyahankii Soomaaliyeed ee allifay Far Soomaaliga aan maanta u naqaan B,T,J ee la hirgalayay sanadkii 1972.
↑ name="Coulmas 140" Daniels and Bright (1996), pp 92–96
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Soomaali_Alifbeet&oldid=161938"